“Waxaan ku dhawaaday inaan ka fariisto kubadda cagta” – xiddig ka tirsan kooxda Real Madrid – Gool FM
“Waxaan ku dhawaaday inaan ka fariisto kubadda cagta” – xiddig ka tirsan kooxda Real Madrid
Dajiye May 18, 2019
(Espain) 18 Maajo 2019. Goolhayaha kooxda Real Madrid ee Thibaut Courtois ayaa shaaca ka qaaday inuu ku dhawaaday in kubadda cagta uu ka fariisto bilawga xirfadiisa ciyaareed, sababa la xiriira jaceyl uu u qabay tartanka Baaskiilka.
Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu daabacay wareysi uu Thibaut Courtois kaga hadlay dhowr arimood ee quseeya xirfadiisa ciyaareed ee kubadda cagta.
“Waxaan aad u jeclaa tartanka Baaskiilka, markii aan ahaa 11 ama 12 sano jir, waxaana u sheegay waalidiinteyda wixii aan jeclahay, laakiin ugu dambeyntii waxaan sii waday xirfadeyda kubadda cagta”.
“Waxaa fiicnaan lahayd inaan taageerayaasha siino waxay u dabaal dagaan, kahor inta aan la aadin fasaxa dhamaadka sanadka, in qaab fiican aad kaga dhameysato xili ciyaareedka, waa arin aad u wanaagsan kahor xili ciyaareedka cusub”.
“Kooxda waxay si adag u sameysay tababarka, waan ognahay inuusan ahayn xili ciyaareed fiican, laakiin waan fiicnaan doonaa, waxaan isku dayi doonaa inaan diyaar u noqono xilli ciyaareedka soo socda, isla markaana xili ciyaareedkan aan ku dhameysano si wanaagsan”.
Si kastaba Real Madrid ayaa Axada ku martigelin doonta garoonkeeda Santiago Bernabeu kooxda Real Betis, si ay u wada ciyaaraan kulankooda ugu dambeeya horyaalka La Liga ee xili ciyaareedkan.
Jamie Carragher oo ku booriyay kooxda Liverpool inay dib ula soo saxiixato Philippe Coutinho
Dib u dhac ku yimid wahadalladii heshiis kordhinta Marcus Rashford ee kooxda Manchester United